China Hydraulica Cylinder Seamless Pipe factory sy mpamatsy | XUANZE
Fantsom-by vy tsy misy fantsom-baravarankely dia mety amin'ny solika, varingarina hydraulic, fanodinana mekanika, fantsom-pifandraisana matevina, indostrian'ny simika, herinaratra, indostrian'ny boiler, hafanana ambany, hafanana ambany ary fanoherana ny harafesina ary fantsona vy tsy misy fangarony, ary mety amin'ny solika, fiaramanidina
Fantsom-by vy tsy misy fantsom-baravarankely dia mety amin'ny solika, varingarina hydraulic, fanodinana mekanika, fantsom-pifandraisana matevina, indostrian'ny simika, herinaratra, indostrian'ny boiler, hafanana ambany, hafanana ambany ary fanoherana ny harafesina ary fantsona vy tsy misy fangarony, ary mety amin'ny solika, fiaramanidina, fandrendrehana, sakafo, fiarovana rano, herinaratra, indostria simika, fibre simika, milina fitsaboana ary indostria hafa.
Noho ny fihenan'ny sisin-tsolika sisa tavela amin'ny velaran'ny varingarina hydraulic, manampy ny manidy ny vaky micro bitika ary manakana ny fanitarana ny fikaohon-tany. Noho izany dia azo hatsaraina ny fanoherana ny harafesin'ny etona ary azo hahemotra ny famokarana na fanitarana ny triatra harerahana, ka azo hatsaraina ny tanjaky ny fantsom-bozaka. Amin'ny alàlan'ny famolavolana famolavolana, ny sosona asa mangatsiaka miasa mangatsiaka dia miforona eo amin'ny faritra mihodina, izay mampihena ny elastika misy ny fifandraisana amin'ny mpivady mitoto.
Noho izany, nohatsaraina ny fanoherana ny fiakanjoan'ny rindrina anatiny amin'ny fantsona quilting ary ialana ny may vokatry ny fikosoham-bary. Aorian'ny fihodinana, ny fihenan'ny fahasarotan'ny tany dia afaka manatsara ny toetra mifanentana.
Rolling dia karazan'akan-drongony maimaim-poana amin'ny chip, izay mampiasa ny fiovaovan'ny plastika amin'ny vy amin'ny hafanan'ny efitrano mba hanamafisana ny tsy fitovian'ny mikraoba eo ambonin'ny sehatry ny workpiece, mba hanovana ny firafitry ny tany, ny toetra mekanika, ny endrika ary ny habeny. Noho izany, ity fomba ity dia mety hahatratra ny famitana sy ny fanamafisana amin'ny fotoana iray, izay tsy azo atao amin'ny fitotoana.
Na inona na inona karazana fomba fanodinana ampiasaina, dia hisy hatrany ny marika tsy miovaova eo amin'ny faritra, ka miteraka tampon'isa sy lohasaha misavoana,
Fitsipika fanodinana: ity dia karazana famaranana tsindry, izay mampiasa ny toetra plastika mangatsiaka amin'ny metaly amin'ny hafanan'ny efitrano, ary mampihatra tsindry sasany eo ambonin'ny sehatry ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fitaovana mihodina mba hahatonga ny vy eo ambonin'ny sehatry ny workpiece hamokatra mikoriana plastika ary fenoy ny valan-tseranana ambany sisa tavela, mba hampihenana ny fahamendrehan'ny sangan'asa. Noho ny fahasimban'ny plastika amin'ny metaly mihodina, mihamangatsiaka ny firafitry ny tampon-tany ary nanjary tsara ireo voamaina, namorona sosona fibrous matevina ary namorona sosona adin-tsaina sisa tavela. Ny hamafin'ny hery sy ny tanjaky ny tany dia nohatsaraina, ka nohatsaraina ny fanoherana, ny fanoherana ny harafesina ary ny fifanarahan'ny tontolon'ny asa. Rolling dia fomba fanodinana plastika maimaim-poana.
Ny tombony amin'ny fantsom-by tsy misy vy ho an'ny varingarina hydraulic:
1. Ny fahasarotan'ny tany dia mety hahatratra RA ≤ 0,08 & micro; M.
2. Ny ovalma dia mety ≤ 0,01mm.
3. Ampitomboina ny hamafin'ny tany mba hanafoanana ny fihenan'ny fihenjanana, ary hitombo ny h henjana ≥ 4 °
4. Aorian'ny machining dia misy sosona adin-tsaina sisa tavela ary 30% ny tanjaky ny havizanana.
5. Izy io dia afaka manatsara ny kalitao mifanentana, mampihena ny akanjo sy manalava ny androm-piainan'ny faritra, fa mihena kosa ny vidin'ny fanodinana.
Pipe vy tsy misy valaka amin'ny varingarina
Hatsarao ny fihenan'ny rerakagth ny fantsona quilted.
Hatsarao ny fanoherana ny akanjo amin'ny rindrina anatiny amin'ny fantsona quilted.
Sodina avo lenta
Ampiasaina ho an'ny tsiranoka, fantsom-bozaka, fantsom-pitaterana avo lenta ho an'ny vilany, faneriterena avo lenta ho an'ny fitaovana zezika, fandavahana geolojika, fandavahana menaka, famotehana solika, collars fametahana solika, familiana fiara, sambo.
Tombony amin'ny fampiasana vokatra hydraulic
Raha ampitahaina amin'ny fampitana mekanika sy ny fifindran'ny herinaratra dia manana ireto tombony manaraka ireto ny fandefasana hydraulic:
1. Ny singa samihafa amin'ny fampitana hydraulic dia azo alamina tsara sy mora arakaraka ny filàna.
2. Mavesatra maivana, kely habe, tsy mety mihetsika ary hafainganam-pandeha haingana.
3. Fandidiana sy fanaraha-maso mora azo, izay afaka mahatsapa ny famerana ny hafainganam-pandeha tsy misy dingana amin'ny sakany (fandrindrana hafainganam-pandeha hatramin'ny 2000: 1).
4. Ny fiarovana be loatra dia azo tanterahina ho azy.
5. Amin'ny ankapobeny, ny menaka mineraly dia ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny asa, ny faritra mihetsiketsika azo afangaro irery, ary lava ny androm-piainana;
6. Mora ny mahatsapa ny fihetsiketsehana mivantana /
7. Mora ny mahatsapa ny mandeha ho azy ny milina. Rehefa raisina ny fanaraha-maso mitambatra elektro-hydraulic dia tsy ny haavon'ny dingana fanaraha-maso mandeha ho azy ihany no azo tanterahina, fa ny fanaraha-maso lavitra koa dia azo tanterahina.
Previous: Fitsaboana hafanana
Manaraka: Sodina miendrika endrika manokana